Fuuli agarsiissame (x) fi idaa'tiin fuulootaa (y) akkaataa Fuula x/ytti mul'ataniiru. hantuutteedhaan yammuu galmee tokko keessa martu, lakkoofsi fuulaa qabduu hantuuttee yammuu gaddhiistu mul'ata. Yammuu kabala maraa mirgaa fayyadamuun martuu, Lkkoofsawwan fuulaa akka qajeelcha Gargaarsaa tokkootti mul'ata. Dhangiin lakkaawwii fuulaa kan kabala haalojii fi kabala maraa walfakkaata.
Agarsiisaa Naanna'aa, dirree Lakkoofsa Fuulaa irra lama-cuqaasuun, kaasuu fi dhaamsuu nidandeessa.
Gara fuula gooree tokko deemuuf, qabduu qaanxii Naanna'aa keessaa, Fuula keessaa lakkoofsa fuulaa galchi, kana booda Halchi dhiibi.
Qabduuwwan qaxxaamura Shift+CommandCtrl+F5 dhiibuun, lakkoofsa fuulaa tokko galchuutti kaateeta. yammuu Galchi dhiibdu, qareen gara fuula filatameetti siqa.